मनोरंजन Archives - Enepal Serofero
२०७५ माघ ०२ गते बुधबार कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने मिठाइ वा तिल खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । २०७५ माघ ०२ गते बुधबारको राशिफल मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – मन पर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत पाइएला । बन्दव्यापारबाट लाभ मिल्नेछ । फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्नेछ । आर्थिक अवस्थामा दृढता आउने छ । कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्नहरूका लागि यथेष्ट लाभ लिन सकिने समय छ । सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । दिन रमाइलो गरी बित्नेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – दुःखसुख, आयव्यय, सफलता–असफलता उस्तैउस्
कुर्तामै बसी बसी यस्तो डान्स जुन देखर तपाई हेरेको हरेई हुनुहुन्छ (भिडियो सहित ) पुरा हेर्नुस==>>
कुर्तामै बसी बसी यस्तो डान्स जुन देखर तपाई हेरेको हरेई हुनुहुन्छ (भिडियो सहित ) नोट:- उक्त भिडियो अन्तिमा रहेको छ ढाड तथा कम्मर दुख्नबाट बच्न के गर्ने ? डा. आकाश पोखरेल हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ गोर्खा पब्लिक हस्पिटल प्रालि, दाङ नेपालमा ढाड दुख्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । झन्डै ८० प्रतिशत व्यक्ति जिवनकाे कुनै पनि समयमा याे समस्याबाट पीडित छन् । आजभोलि बसेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यति मात्रै होइन, व्यायाम नगर्ने र खानपानमा बेवास्ता गर्नेलगायतका कारणले ढाड दुख्ने बिरामी बढ्दै छन् । त्यसैले ढाड दुखेपछि उपचारका लागि अस्पताल भौँतारिनुभन्दा दुख्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । तल दिइएका केही टिप्स ढाड दुख्नबाट बचाउन महत्वपूर्ण बन्न सक्छ : अफिसमा काम गर्दा बसाइ मिल्दैन र ढाड दुख्छ । लामो समयसम्म कुर्सीमा बस्नेहरूमा यो समस्या भेटिएको छ । धेरै समयसम्म कुर्सीमा बस्दा
रवि लामिछानेले फेसबुकमै आफ्नी पूर्वपत्नी इशा र उनको व्वाइफ्रेन्डको गोप्य च्याट सार्वजनिक गरिदिए ।
रवि लामिछानेले फेसबुकमै आफ्नी पूर्वपत्नी इशा र उनको व्वाइफ्रेन्डको गोप्य च्याट सार्वजनिक गरिदिए । अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ रवि लामिछाने र इशा लामिछानको नितान्त व्यक्तिगत जिवनी । २ दिनअघि रवि लामिछानेकी पूर्वपत्नी इशा लामिछानेले चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल र रवि लामिछाने विवाह वन्धनमा बाँधिदैछन् भनेर सार्वजनिक गरिदिइन् त्योसँगै रविको एक विदेशी महिलासँगको सम्वन्धले एक बालक समेत भएको सार्वजनिक भयो । त्यसपछि रविले एक स्टाटस लेख्दै आफ्ना विगतका सम्पूर्ण कुराहरु राखेका थिए । त्यो सँगसँगै सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा पनि सबै कुरा बयान गरेका थिए । त्यसपछि इशाले २५ वर्ष लामो सम्वन्धका तीता मिठा क्षणहरु सार्वजनिक गरेकी थिइन । आफ्नो घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै १० वटी महिलासँग श्रीमानले सम्वन्ध राख्छ भने को महिला डिप्रेसनको शिकार पर्दैन भन्ने आसयको समाचार प्रकाशित भएपछ
रीना श्रेष्ठ/सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक – ‘मेरो बहिनी इराकमा हराइन्, खोजी दिनु पर्‍यो,’ कुर्सीमा बस्न नभ्याउँदै दोर्जे लामाले अनुरोध गर्नुभयो । सूचना केन्द्रमा समस्या लिएर आउने अरुको जस्तै उहाँको अनुहार पनि मलिन देखिन्थ्यो । ‘दाइ विदेश जानु पर्‍यो भनेकी थिइन् बहिनीले, मैले त राम्रो ठाउँ बुझेर जाउ भनेको थिएँ, दलालले फकाएर लगिहालेछन्, कहाँ पुर्‍याइदिए खै सम्पर्क छैन’ सिन्धुपाल्चोकका दोर्जेले खुइय सुस्केरा हाल्नुभयो । २०७२ चैतको अन्तिमतिर घरबाट हिँडेकी बहिनी मिङमारसँग दोर्जेले २०७३ जेठमा फेसबुकको म्यासेन्जरमा एकपटक कुरा गर्नुभयो । ‘फेसबुकमा बोलेकी थिइन्, मलाई ठीकै छ, इराक आइपुगें भन्थिन्, त्यसपछि कुरा भएको छैन, अहिले त त्यो फेसबुकमा पनि भेटिंदैन,’ दोर्जेले बहिनीसँग भएको अन्तिम कुराकानी सम्झनुभयो । त्यसपछि बहिनीका बारेमा उहाँलाई कुनै खबर आएको छैन । २०७२ को भूकम्पले घर ढाल्यो
म २५ वर्षको पुरुष हुँ । केही दिनअघि मैले एउटा यौनकर्मीसँग यौनसम्पर्क गरेको थिएँ । यौन सम्पर्कका क्रममा मैले लगाएको कन्डम फुट्यो । अब मलाई एचआईभीको डर छ । यसको केही समाधान छ कि ? ८०४६० यौनकर्मीसँगको सम्पर्क ? यौनकर्मी अर्थात् यौन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क गर्दा एचआईभीलगायत विभिन्न यौनरोगको संक्रमणको सम्भावना बढी हुने कुरा त पक्कै सुन्नुभएकै होला, तर यहाँ यौनसम्पर्क कत्तिको सुरक्षित थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । असुरक्षित यौनसम्पर्कमा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले सुरक्षित बनाउन कन्डमको सही प्रयोग अनिवार्य छ । कन्डम फुटेका कारणले तपाईंको यौनसम्पर्क असुरक्षित बनेको कुरा स्पष्ट नै छ । मुख्य रूपमा यौनसम्पर्क वा अन्य यौन क्रियाकलाप गर्दा योनिबाट निस्किएको रस तपाईंको शरीरको भित्री छाला अर्थात् श्लेष्म झिल्ली (mucus membrane) को सम्पर्कमा आएको छ कि छैन वा तपाई
९८ % व्यक्तिहरुलाई थाहा छैन शारीरिक सम्बन्ध पछि गर्नै पर्ने यो काम
महिला र पुरुष बीच हुने शारीरिक सम्बन्धको कारणले गर्दानै मानव सभ्यता यहाँ सम्म आइपुगेको छ। शारीरिक सम्बन्धले स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरको बारेमा धेरैलाई थाहा हुँदैन। विभिन्न अनुसन्धानले शारीरिक सम्बन्धले स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरुको बारेमा तथ्याँकहरु निकालिसकेका छन्। शारीरिक सम्बन्धको क्रममा हुने साना-साना गल्तिले पनि दैनिकीमा ठूलै असर पार्नेमा कुनै दुविधा छैन। शारीरिक सम्बन्धको क्रममा युवा-युवतीहरु थकाइ मार्नको लागि निदाउने पनि गर्छन्। तर यसरी निदाउनाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्। आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि शारीरिक सम्बन्ध पछि शौच गर्न पर्ने चिकित्सकहरुको बुझाइ रहेको छ। शारीरिक सम्बन्ध पछि महिला मात्र नभई पुरुषहरुको नशा सफा गर्न पर्ने हुँदा शारीरिक सम्बन्ध पछि पिसाव गर्नाले धेरै फाइदा पुर्याउंछ। यसरी शारिरीक सम्बन्ध पछि शौच पिसाब गर्नाले नशा
हिरोइन नेहा शर्माको सेल्फीमा देखियो ‘सेक्स टोय’, ट्वीटरमा फोटो आएपछि हंगामा
मुम्बइ। बलिउडको दुनिया बाहिरबाट जति चमकदार देखिन्छ भित्र भने त्यस्तो हुँदैन । बलिउडका हिरोइनहरु केहीले निकै सफलता पाइरहेका छन् केही भने निकै संघर्ष गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ केही हिरोइनहरु आफैंले चाहेर विवादित बन्छ् केहीलाई भने अरुले विवादित बनाइदिन्छन् । अरुका कारण बदनाम हुनुपर्ने हिरोइनको सूचिमा पछिल्लो समय नेहा शर्मा परेकी छिन् । जसको एउटा सेल्फी अरु कसैले एडिट गरेर ट्वीटरमा अपलोड गरिदिँदा उनले धेरै बदनामी सहनुपरेको छ नेहाले ट्वीटरमा आफैंले एउटा सेल्फी पोस्ट गरेकी थिइन् । यो फोटो कुनै होटलको कोठाको जस्तो देखिन्थ्यो । यो फोटो सामान्य थियो तर कसैले यो फोटो डाउनलोड गरेरएडिट गरी पुनः ट्वीटरमा पोस्ट गरिदियो । ती व्यक्तिले यो फोटो एडिट गरेर त्यसमा सेक्स टोय थपिदिए जसका कारण यो फोटो निकै भाइरल भयो । केही प्रयोगकर्ताले यसलाई साँच्चैको ठानेर रिट्वीट गरिदिँदा यो फोटो भाइरल भएको थियो जसका कारण न
४६ बर्सिय डिभोर्स आन्टीलाई घुम्न जानी फोनमा बोल्ने केटा साथिको खोजी … तल सबै दियिएको छ हेर्नुहोस ।।।
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु देहसुख अर्थात् सेक्समात्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्। कसैका लागि यो एकप्रकारको रोजगारी हो, कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि, कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द। यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमारु अनि यसका जटिलता के–के हुन्रु अम्मर जिसीले केलाउन खोजेका छन्। केस नं १ काठमाडौँका २३ वर्षीया जनम परिवारले बिहेको कुरा झिक्यो कि सुइँकुच्चा ठोक्छन्। अरू विषयका पारिवारिक छलफलमा उनी सहभागी हुन्छन्। तर, बिहे भन्नासाथ उनको सातो जान्छ। कारण, उनी
विदेशमा रहेका श्रीमानसंग सेक्स भिडियो कल गर्दै धादिंगकी १८ बर्षिय युवती.लिक भएको क्लिप (14,874)
मगर्नी भाउजूको कथा (12,787)
वाइन पिउँदै भाउजु संग बितायाको त्यो रात (11,359)